Amin'ny antsasaky ny halavan'ny lamba volomparasy Pocillopora (ambony havia) -tsy kolontsaina Pocillopora Miseho toy ny iray, miaraka amin'ny antsasak'izany (ny fotsy) ary ny tapany faharoa (volomparasy) manomboka mivelatra. Matetika ny vatosoa no manjelanjelatra ny lokony (ambony volomparasy ambony Pocillopora) rehefa manomboka mivelatra izy ireo. Misy ampahany mibaribary Pocillopora (ambany ankavanana) dia mety hiaina na mety ho faty tahaka ny sary farany (ambany havaozina) tafahoatra amin'ny alika sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ambony sary tsara indrindra © R. Salm; ny hafa rehetra © D. Obura
Ny vatohara fananganana vatohara dia ahitana zooxanthellae, izay tokotanin'ny tokotany tokana izay miaina ao anatin'ny vatan'ny haran-dranomasina. Ny Corals sy ny zooxanthellae dia manana fifandraisana simiômaika. Ny Zooxanthellae dia manome kôbhydrate amin'ny hara-kisoa amin'ny alalan'ny photosynthesis, mamela ny mpikarakara (ny haran-dranomasina) hitantanana loharanom-pahalalana amin'ny fitomboana sy ny fananganana ny karetôna karbôna. Ny mpikarakara ny haran-dranomasina, ho setrin'izany, dia manome ny zooxanthellae amin'ny sakafo mahavelona sy ny tontolo voaaro.
Ny fanasan-damba dia fitaratry ny adin-tsaina izay mitranga rehefa miala ny fifandraisana coral-zooxanthellae ary ny zooxanthellae dia voaroaka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na rehefa mihena ny pigment ao anatin'ny zooxanthellae.
Ny fahaverezan'ny zooxanthellae dia mahatonga ny taolana haran-dranomasina misy karbonina kalsioma fotsy hita amin'ny alàlan'ny tavy mangarahara, izay mahatonga ny haran-dranomasina ho fotsy mamirapiratra na 'mihosotra'. Ny haran-dranomasina dia afaka miaina mandritra ny fotoana maharitra (izany hoe andro na volana maromaro) tsy misy ny zooxanthellae, fa ny fahafahany miaina dia miankina amin'ny ambaratonga sy ny karazana adin-tsaina ary ny fahatsapana ny haran-dranomasina. Raha maharitra ny adin-tsaina, dia mety ho mosarena sy ho faty ny vatohara.
Ny banga ihany koa dia mitranga amin'ny biby hafa miaraka amin'ny zooxanthellae, toy ny foraminifera, sponges, anemones ary gilasy lehibe.
Ny fanelingelina dia mety ho vokatry ny maha-lahy sy maha-lahy sy maha-olona azy, toy ny (ambony) mivaingan'ny masoandro miaraka amin'ny hafanan'ny rano; (aretina afovoany) vokatry ny bakteria, holatra ary viriosy; ary (ambany) ny fandotoana amoron-dranomasina izay mampihena ny kalitaon'ny rano ary mampitombo ny fahatsapana ho marefo. Sary ambany mankany ambany © Great Barrier Reef Marine Park Authority, D. Obura, M. Erdman
Ny fanasan-kandrina dia valim-bavaka ary mety ho vokatry ny antony maro. Ny loharanom-pifaliana izay mety hitarika ho amin'ny fanariana ny haran-dranomasina dia:
Nihena na nihena drano
Fampitomboana ny masoandro (fotsy (PAR) sy ny taratra ultraviolet)
Fiovana amin'ny salinity (oh: salinity manaitra avy amin'ny oram-batravatra na tondra-drano)
Sedimentation avy amin'ny asa toy ny fanodinana
Ny fipoahana amin'ny rivotra (ohatra, noho ny tondra-drano)
Fiovana amin'ny simia momba ny rano (oh: ranomaso)
Ireo loharanom-pihetseham-po ireo dia afaka manome anjara amin'ny hetsika mibaribary eo an-toerana (zato hatramin'ny metatra an-jatony), fa hetsika manga amin'ny vatohara dia mipoitra eo amin'ny sehatra isam-paritra, matetika mamoaka mihoatra ny folo ka hatramin'ny kilometatra an-jatony. Ny antony voalohany mahatonga ny fanasan-damba dia ny fiakaran'ny hafanam-be mitambatra amin'ny fampirimana ny masoandro.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMpitantana Reefatra mitondra mankany amin'ny Coral Bleachingmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGBR Reef Education
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoStanford Microdocs Coral Bleaching